रक्सीको मा;तमा गरेका थिए प्रपोज नेहालाई खोलिन रहस्य । – live 60media
रोहनप्रीत सिंह र नेहा कक्करको जोडी फ्यानको मनपर्ने जोडि हुन यी दुईको प्रेम कहानी धेरै राम्रो छ र विवाह पछि, ती दुबैको चर्चा पनि उत्तिकै भयो । तर के तपाईंलाई थाहा छ नेहा कक्कड़लाई रोहनप्रीतले रक्सीको मा तमा विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए? हो, हास्य अभिनेता कपिल शर्माको कार्यक्रममा नेहा कक्कड़ आफैले भनेकी थिईन ।
नेहाले बताइन् कि उनले रोहनप्रीतलाई “नेहू दा व्याह” गीतमा भेटे। शुटिंग पछि रोहनप्रीतले नेहालाई उनको स्नैपचट आईडी मागेका थिए, जुन पछि दुबैले कुरा गर्न थाले । नेहाका अनुसार उनले शुरुमा नै विवाह गर्न चाहेको कुरा स्पष्ट पारिदिएकी थिइन, किनभने उनलाई लाग्यो कि अब उनको घरजम गर्ने बेला भएको छ जीवनको त्यो लक्ष्यमा पुगेकी छिन् । जे होस् रोहनले उनलाई भने कि ऊ २५ बर्षको मात्र हो र विवाहको लागि तयार छैनन ।
रोहनप्रीतको यो कुरापछि नेहाले उहाँसँग कुरा गर्न केही समय रोकिन। यद्यपि नेहाले भनिन कि एक दिन रोहनप्रीतले उनलाई सन्देश पठाए कि नेहू, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन । हामी विवाह गरौं । नेहाका अनुसार उनले यस कुरामा विश्वास गरिनन । भनिन, ” २-३ बियर पीय होलान ।” मैले सोचे कि बियर लागेछ होला, छोड्नुहोस् बिहान यो सब बिर्सिने छ ।
भोलिपल्ट नेहा कक्कड़ एक गीत शूट गर्न चंडीगढ़ गइन् र रोहनप्रीत उनको होटलमा आई उनलाई त्यहाँ भेटे । त्यसपछि रोहनप्रीतले उनलाई सोधे नेहालैइ अघिल्लो कुरा सम्झ्यौ । नेहालाई लाग्यो कि रोहन विवाह प्रती सि,रियस छन तब उनले आफनो आमा सङ्ग भेट गराइन र आमालाइ पनि रोहन पहिलो भेट्मै मन परेको थियो ।
← ‘खोप लगाएको एक सातापछि कोरोना संक्रमण’
यी ६ चिज घरमा राख्नाले, कहिल्यै हुँदैन धनको कमी ! →